Global Voices teny Malagasy » India: Vehivavy tantsaha mitsangana hiady amin’ny fikorontanan’ny toetrandro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jolay 2018 4:34 GMT 1	 · Mpanoratra Belen Bogado Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Vehivavy sy Miralenta, Resadresaka Hanatsarana ny Tany
Vondrom-behivavy iray ao India no naneho fa na dia eo aza ny tombony omena ny lahy manoloana ny vavy sy ny fahantran-dry zareo dia mety ho lasa fitaovana mahery vaika izy ireo amin'ny fiadiana ny fikorontanan'ny toetr'andro sy hampihena ny fandefasana etona mahatonga izany.
Any India, ireo mponina marefo indrindra amin'ny fikorontanan'ny toetr'andro – ny vondrom-piarahamonina mahantra sy ny vehivavy – no tena iharany voalohany, sy tràny indrindra. Ohatra, naneho hevitra momba ny fiantraikan'ny haintany eo amin'ireo tantsaha , sy ny fiantraikany mivantana eo amin'ny vehivavy sy ny ankizy ny bilaogy Oxfam India .
Tao anatin'ny 12 taona farany, efa ho 50 ny tantsaha namono tena isan-taona, ny ampahafolon'izy ireo dia vehivavy tantsaha. (…) Nitombo ny isan'ireo tantsaha nanomboka nifindra monina tany an-tanàndehibe mba hitady sakafo. Ary nanjary nanafintohina ny toe-draharaha rehefa nihanitombo ny famarotana vehivavy sy ankizy tao amin'ny distrika.
Ny lahy sy ny vavy, marefo amin'ny fikorontanan'ny toetrandro
Tombanana fa mamokatra maherin'ny 50% amin'ny sakafo rehetra eran-tany ny vehivavy . Any India, vehivavy maherin'ny 84% no tafiditra amin'ny asa ara-pambolena , vokatr'izany, lasa lasibatra be amin'ny fiantraikan'ny fikorontanan'ny toetrandro izy ireo. Ankoatra izany, mahatonga azy ireo ho marefo tsy araka ny tokony ho izy noho ny fahasimban'ny tontolo iainana ny fanomezana tombondahiny ny lahy manoloana ny vavy. Bilaogera Pricilla Stuckey, manana PhD nilaza tao amin'ny bilaogy This Lively Earth fa iharan'ny fikorontanan'ny toetrandro kokoa sy be loatra ny vehivavy :
Mitàna anjara toerana lehibe amin'ny fomba iaretan'ny vehivavy ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro ihany koa ny fanavakavahana mihatra amin'ny vehivavy. Any India, ohatra, rehefa mahita ny fihenan'ny vokatr'izy ireo hatramin'ny atsasany ny vehivavy ary mihena koa ny hatsaran'ny vokatra noho ny fikorontanan'ny toetrandro, miharatsy indroa avo heny ny fahasalaman'ny vehivavy noho ny loza anankiroa amin'ny fihenan'ny vokatra sy ny tsy fitoviana.
Ohatra iray amin'izany i Sita Debi, tantsaha. “Rehefa tsy misy orana, dia tsy maintsy miasa tena mafy any an-tsaha izahay vehivavy mba hiezaka hampitombo ny vokatra. Mijaly ihany koa amin'ny sakafo satria izahay no farany misakafo eo amin'ny latabatry ny fianakaviana. Vokatr'izany, maro aminay no anemika (tsy ampy rà), “hoy izy tamin'ny lahatsary  navoaka tao amin'ny bilaogy Find Your Feet. Vehivavy tantsaha hafa no hita ao amin'ny lahatsary manazava ny voka-dratsin'ny fikorontanan'ny toetr'andro eo amin'ny fiainan'izy ireo.
Rehefa miady ny vehivavy
Tsy mipetra-potsiny miandry iharan'ny fikorontanan'ny toetr'andro ny vehivavy Indiana. Miady koa izy ireo. Araka ny asehon'ny tapany faharoa amin'ny lahatsary, mamolavola fomba vaovao hiatrehana sy hisorohana ny fiakaran'ny mari-pàna manerantany ny vehivavy.
Araka ny notaterina tao amin'ny lahatsoratry ny Inter Press Service :
Farafahakeliny ny fambolena no mandefa ny 20 isanjaton'ny famoahana etona ao India , indrindra ny fandefasana methana avy amin'ny tanimbary sy ny omby ary ny oksida be azota avy amin'ny zezika. Araka ny tatitra taona 2007 nataon'ny Vondrona Intergovernemantaly ao amin'ny Firenena Mikambana momba ny fikorontanan'ny toetrandro (IPCC), hiova amin'ny fomba tsy mifandanja ny maodelin'ny rotsak'orana ao India, hilatsaka mandritra ny andro vitsy kokoa ny orambe, ka miteraka fisafotofotoana mivantana eo amin'ny sehatry ny fambolena.
Ohatra hafa amin'ny vehivavy mandray dingana mialoha hiadiana amin'ny fikorontanan'ny toetr'andro ny mitranga ao an-tanànan'i Bidakannen , izay mamboly voana rongonimbazaha (graines de lin), pitipoà maitso sy voanjobory, varimbazaha sy legioma hafa eo anelanelan'ny tanamasoandro, tsy misy rano sy akora simika, toy ny ranom-panafody famonoana voalavo avokoa izany.
Ity karazana asa fambolena ity dia mahasoa indrindra ho an'ireo vehivavy dalit na vehivavy tsy manam-bola, izay mandrafitra ny rafitra saranga ambaratonga ambany indrindra ao India. Amin'ny alalan'ity rafitra ity, afaka mamorona fikambanana ankehitriny ireo vehivavy ao amin'ny tanàna manodidina ny 75 ao amin'ny distrikan'i Medak mba hivarotra ny vokany, ary koa manangona vokatra betsaka ho an'ireo mpikambana mahantra kokoa. Ankoatra izay, ny fampiasana ny fomba fanao amin'ny fampihenana ny famoahana etona sy mpandoto manimba dia manampy ihany koa amin'ny fampihenana ny fahantrana.
Tsy nandalo fotsiny tao anatin'ny fiarahamonina aterineto anefa ny fitarihana sy ny ezak'ireo vehivavy indiana ireo. Shiba Prosad Bhattacharyya naneho hevitra tao amin'ny vohikala India Together: 
Misaotra anao noho ny lahatsoratrao fa notantaraina teto ireo vehivavy natao ho maodely ho an'izao tontolo izao. (…) Zon'olombelona ny sakafo fa tsy entam-barotra natao hakan-tombony (izaitratra). Tsy miasa ho amin'ny tombontsoan'ny filan-kevi-pitantanana ny reny voajanahary. Hitondra mankany amin'ny krizin-tsakafo bebe kokoa ny tombombarotra azon'ny vondronorinasa. Avy aminao no hanambarako ny fanajako lehibe ho an'ireo vehivavy mpitarika izay nampiseho ny tsy fisian'ny fiantraika ratsy eo amin'ny tontolo iainana, ny fahasalamam-bahoaka sy ny fianakaviana mpamboly fa ny famokarana sakafo dia mety ahazoantsika tombontsoa, lovainjafy ary mamahana antsika rehetra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/04/122234/
 fiantraikan'ny haintany eo amin'ireo tantsaha: http://oxfamindia.wordpress.com/human-impact/change-in-climate-results-to-prolonged-droughts-in-anantpur/
 Oxfam India: http://oxfamindia.wordpress.com/latest-from-the-blog/
 mamokatra maherin'ny 50% amin'ny sakafo rehetra eran-tany ny vehivavy: http://www.thp.org/system/files/Factsheet+on+Women+Farmers+and+Food+Security.pdf
 India, vehivavy maherin'ny 84% no tafiditra amin'ny asa ara-pambolena: http://womensearthalliance.blogspot.com/
 iharan'ny fikorontanan'ny toetrandro kokoa sy be loatra ny vehivavy: http://thislivelyearth.com/2009/10/15/women-farmin-and-climate-change/
 Inter Press Service: http://www.ipsnews.org/news.asp?idnews=46131
 India Together:: http://www.indiatogether.org/2009/mar/agr-ddsfood.htm